Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in abaaaro ay ku dhufteen Degaano ka tirsan Maamulada Somaliland iyo Puntland – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Xukuumadda Soomaaliya oo sheegtay in abaaaro ay ku dhufteen Degaano ka tirsan Maamulada Somaliland iyo Puntland
MAREEG 12 February 2016
Muqdisho (Mareeg.com)—Agaasimaha Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Maxamed Qeyroow Aadan oo warbaahinta la hadlayay ayaa sheegay in abaaro baahsan ay ku dhufteen Degaano hoosta Maamulada Soomaaliland iyo Puntland.
Agaasime Maxamed Qeyroow Aadan ayaa xusay in Xoolo badan ay ku baaba’een abaaraha ku dhuftay Degaanadaasi, isagoona qeexay in loo baahan yahay in Soomaalida ay isku damqato islamarkaana sida ugu dhaqsiyaha badan loogu gargaaro Dadka ay saameeyeen abaarahaasi.
Maxamed Qeyroow, Agaasimaha Wasaarada Diinta iyo Awqaafta ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale waxuu tilmaamay in laga cabsi qabo in abaarahaasi ay ku baahaan Degaano kale oo horleh oo ka tirsan Gobolada Dalka Soomaliya.
Xiliga Jilaalka ayaa inta badan waxey abaaro baahsan ku dhuftaan qeybo ka mid ah Dalka Soomaaliya iyadoona xusid qoraal dhawaan ka soo baxay Qaramada Midoobay in lagu sheegay in Boqolaal Qoys ay wajahayaan Xaalado nolol xumo oo ay sababeen Abaaro ka jira qeybo ka mid ah Dalka Soomaaliya
Wariyayaasha oo soo dhaweeyay in hogaanka ururka Saxafiyiinta qaranka la doorto
Madaxweyne Xasan Sheekh iyo Wafdi uu Hogaaminaayo oo goor dhow ka dagay dalka Jarmalka